Honduras : Ao Sabanagrande, Vazivazy Tsy Fanao Intsony Ny Fanabarabaràna Polisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Marsa 2012 0:33 GMT
Ireo polisy ao Honduras dia teo ambany fanakianana mamay ho mpanao kolikoly, mpandroba ireo mponina, ary mpiray tsikombakomba amin'ireo mpamono olona sy ireo andian-jiolahy. Ary tsy isalasalana, fa ny fifandroritana eo amin'ny sivily sy ny polisy dia miha mahery.
Tao amin'ny bilaoginy Bitácora del Párvulo [es], i Fabricio dia nanazava ilay rivotra niely tao amin'ilay renivohitra io andron'ny Rey Feo io :
Fabricio dia nanambara fa [es] fa andro maromaro taty aoriana , ireo polisy dia niasa fatratra hisambotra ireo tanora nandray anjara tamin'ilay hetsika.Teo amin'ny olona 150 no namaly “nanohitra ny ny fanalambaraka sy ny fisamborana tsy amin'antony nataon'ireo polisy” taminà tovolahy maro.
Isaorana manokana i Fabricio Estrada tamin'ny fanomezany alalàna an'ny Global Voices hampiasa ny sariny ary koa tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny fanoratana izao lahatsoratra izao nanome vaovao. Tsidiho ny bilaoginy País Fotogénico [es] ahitànao sary maro hafa ary tantara maro avy ao Honduras.